IGAD OO UN-KA UGU BAAQDAY IN SOMALIYALA SAARO CUNAQABTAYN DHINACA CIRKA IYO BADDA AH | Toggaherer's Weblog
Kulan aan caadi ahayn oo shalay (arbaca 20/05/09) ka dhacay magaalada Addis-ababa ee xarunta dalka Itoobiya,oo ay ka soo qayb galeen wasiiro arimo dibadeedyada wadamada ku bahoobay urur-goboleedka IGAD, goobjoogna uu ka ahaa wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Axmed Walad Cabdalla ayaa waxa laga soo saaray baaq codsi ah oo loo gudbiyey UN-ka,nuxurkiisuna yahay in Soomaaliya laga go,doomiyo dhinaca cirka iyo badda. Iyagoo ku sababeeyey in islaamiyiinta mayalka adagi khatar ku yihiin guud ahaan gobolka geeska afrika.
Warku wuxuu intaa ku daray in la ogol yahay oo qudha duulimaadyada diyaaradaha sida gargaarka bini’aadanimo iyo qaadka(Diyaaradaha qaadka waxa loo fasaxay arrin dhaqaale,maadaama cashuurtii dowladaha Kiiniya iyo Itoobiya ka heli jireen baaqanayso haddii la xanibo,iyo iyadoo islaamiyiinta iyo dadka qaadka ka ganacsada aan wada shaqayni dhex mari karin).
Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Seyoum Mesfin oo shirka gudoominayey ayaa fikraddan ku sheegay mid yareyn doonta ajaanibka kusoo qulqulaya Soomaaliya ee ka ag dagaalamaya waxa uu ugu yeedhay Islaamiyiinta soomaalida, waxana joogsan doona buu yiri hubka ay wadamada argagixisada taageeraa diyaaradaha kusoo geliyaan soomaaliya isagoo ula jeeday waddanka ay colka yihiin ee Erteriya. Wasiirku isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu intaa ku daray oo yiri meelaha ugu khatarta badan ayaa ah dekedaha iyo eeriboodyada magaalooyinka Kismaayo,Marka iyo meel kasta oo diyaaradi ku degi karto xataa kuwa macmalka ah.
Shirkan oo Soomaaliya uu u metelayey wasiirka maaliyadda ahna raysal wasaare ku xigeen Md. Shariif Xasan Sh.Aadan ayaa kooxaha kasoo horjeeda dowladiisa ku eedeeyey tacadiyo ay ku hayaan shacabkaSoomaaliyeed oo ka dhan ah islaamnimada,soomaalinimada iyo guud ahaan xaquuqal insaanimada.
Ka qeybgalayaasha shirku waxay isku af garteen in qorshaha islaamiyiintu aanu shaqo ku lahayn sidii nabadi uga dhalan lahayd Soomaaliya, balse hadafkoodu ka durugsan yahay oo aanu ku xadidneyn Soomaaliya o qudha balse ay rabaan inay khalkhal iyo jahawareer geliyaan gobolka geeska afrika iyo guud ahaanba caalamka.
Waxa kale oo wasiiradu soo jeediyeen in cunaqabatayn degdeg ah lagu soo rogo Eriteriya, oo bay yidhaahdeen taageero meleteri u fidisa kooxaha mayalka adag ee ka dagaalama Soomaaliya. Eriteriya waxay urur-goboleedka IGAD oo ay xubin ka ahaan jirtey ka baxday bishii Abriil 2007,waqtigaas oo ay ururka ku eedaysay inuu ku guuldaraystay nabad kusoo dabaalidda gobolka.